Ny fampirantiana RIcheng Medical faha-85 (CMEF) dia mifarana amin'ny fanantenana vaovao
Famintinana ny fampirantiana Miaraka amin'ny lohahevitry ny "Innovation sy Teknolojia, mitarika ny ho avy", ny fampirantiana tamin'ity taona ity dia nampivondrona orinasa marika maherin'ny 3.000 avy amin'ny rojo indostrian'ny fitaovana ara-pitsaboana rehetra ao an-trano sy any ivelany ary vahiny miteny mihoatra ny 300 ao amin'ny tranoheva ...
Inona no atao hoe catole Foley?
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fantsom-bozaka silika misy ny fitsaboana?
Ireo toeram-pitsaboana any amin'ny hopitaly amin'ny ankapobeny dia afaka mahita karazan-tsolika isan-karazany, toy ny fantsom-pandrefesana silika, plastika vita amin'ny siligaoro, mifatotra eo am-pelatanan'ny tady silikôly ireo, ny dingana ankehitriny amin'ny sehatry ny fitsaboana ankoatry ny zava-mahadomelina indrindra indrindra izay fitaovana ara-pitsaboana. , avy eo maninona ny silicone p ...
Ny fampiroboroboana ny vokatra silikona kilasy fitsaboana
Silika vita amin'ny silika no akora ilaina amin'ny fitsaboana aorian'ny fampiasana fitsaboana ara-pahasalamana am-polony taona maro, efa eken'ny vondrom-pitsaboana hatry ny ela, ny fampiasana orinasa marobe matetika, maro ny orinasa goavambe fanaovana silipo ara-pahasalamana ho tanjona lehibe amin'ny fampandrosoana sy ny famolavolana. fingotra silika ara-pahasalamana t ...
Ahoana ny fomba hisafidianana kateter silika mety?
Fampitahana ireo fitaovana samihafa amin'ny catheter urethral
Ampidiro ny tsipika miempo mitsonika
Orinasa momba ny fampivoarana ny vokatra sy ny fianarana
MEDICA, Dusseldorf, Alemana
Tamin'ny 18 ka hatramin'ny 21 Novambra 2019, Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd. dia nandray anjara tamin'ny "hopitaly iraisam-pirenena sy fampirantiana fitaovam-pitsaboana" natao tany Dusseldorf, Alemaina.Ny fampirantiana dia fitsaboana feno malaza eran-tany ...